Phenytoin Sodium Price, Alaab-qeybiye ka socda Bolise
[CAS MAYA. ] 630-93-3
[Foomka Molecular] C15H11N2NaO2
[Miisaanka Molecular] 274.25
[Muuqaalka] Budada cad ee cad
Ku saabsan Phenytoin Sodium
Saamaynta wadnaha iyo xididdada dhiigga ee 'Phenytoin sodium' ayaa ahaa daahfurnaan lagu ogaanayay astaamaha sunta ee bukaanka daroogada lagu daweeyo ee qalalaasaha suuxdinta. Phenytoinsodium waxaa lagu ogaadey inuu sababo bradycardia, dheereeyo PRinterval, soona saaro cilladaha 'T-wave cilladaha' electrocardiogram. Maanta, isticmaalka kiliinikada ee ugu weyn ee loo yaqaan 'phenytoin sodium' ee loo yaqaan 'antiarrhythmicdrug' ayaa lagu daaweynayaa 'arrhythmias' oo dijitaal ah. Waxay ka dhigeysaa otomaatigga wadnaha otomaatig ahaaneed mid dijitaal ah. Sababtoo ah waxay sidoo kale dib udhigtaa kordhinta habka wadista AV ee digitalis, fenytoinsodium waxay faa'iido u leedahay tachycardias supraventricular oo ay sababaan sakhradda daroogada.